Ikhompiyutha yasekhitshini enentwasahlobo yitsale isitshizi
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Tsala iiFaucets / WOWOW Ekhitshini Itheyipu yetheyisi yoRhwebo
I-nickel eqhotsiweyo yaphosa isitofu ekhitshini, Intsimbi yonke engagugi, iqweqwe nobungqina bokuqhuma, umgangatho onyanisekileyo
Ikhitshi lasekhitshini lasentwasahlobo lidiliza isitya sokutshiza 2312000
Ipeyinti yasekwitshini yokuphelisa isitovu ekhitshini yenziwa ukuba isetyenziselwe imveliso kwiindawo zokutyela kuphela. Njengoko unokuqikelela, ukusebenza kunye nokuqina kwiindawo zokutyela kufuna kakhulu kwaye zonke izixhobo zasekhitshini ezinjengesiqwengana seplastiki yokutshiza zesitshizi kufuneka zisebenze kakhulu. Abasebenzi basebenzisa ezi fektri zekhitshi lemizi-mveliso ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kokuthandabuza. Ukuphazamiseka okunokwenzeka kwisitovu sento yokutshiza esitshitshisiweyo kuya kuba yintlekele. Ngenxa yoko, iifishi ekhitshini zekhitshini zenziwe ngokuhambelana nemigangatho ephezulu yeli shishini, kunye nezixhobo ezomeleleyo ngakumbi. Ku-WOWOW siqhele ukusebenzisa imigangatho yeshishini elingasentla, kwaye siye sajolisa ngakumbi ekuqineni nakulo fektri yokomfuziselo ekhitshini yasentwasahlobo yokuthoba isitshizi.
Abantu abaninzi bafake eli khitshi lekitshi lasentwasahlobo lihlisa isitshizi kumakhaya abo. Kuxhomekeka kuyilo lwakho ekhitshini, ukujongwa kwemizi-mveliso kunokusebenzela ikhitshi lakho kakuhle. Ubuncinci uyazi ukuba uzinzo lwale fenitshala ekhitshini lemveliso luphezulu, ukuphela kokusebenza kwayo kungaphezulu-okuphezulu kwaye uyilo lwayo lunika unxibelelwano oluluhlaza, oluyimveliso ekhitshini lakho. Njengoko izitshitshisi zasekhitshini ngokwesiqhelo ziindawo zendalo ezigxila ekhitshini, kunye neli fa lokhitshi elinomtsalane lasekhitshini elihla enyuka ngesitshizi ngokuqinisekileyo uya kubamba yonke ingqalelo ekhitshini lakho. Ngenxa yoyilo lwayo olude, noluncinci, kunye nolwakhiwo oluncinci, le faucet yasekhitshini ilungele ngokukodwa uyilo lwekhitshi langoku. Ke ngoko, le lokitshini lasekhitshini entwasahlobo lidonsa isitshizi ngokuqinisekileyo liya kuphuculwa ngamandla nakuphi na ukuyila kwekhitshi.
Imveliso yasentwasahlobo yokuchela isitovu sesitshizi ekhitshini
Ikhitshi yindawo opheka kuyo endlwini yakho. Kwabaninzi icandelo lokupheka alilo mngeni, kodwa icandelo lokucoca. Njengoko uphekele kwaye utye, ukucoca ikhitshi rhoqo akuwona msebenzi wokubonga kakhulu. Nokuba uthe wacoca ikhitshi ngaphambi kosuku olunye, emva kwesidlo ngasinye kuya kufuneka uqale uphindaphinde. Ngaba ayilunganga into yokuba uyonwabele kakhulu ngokucoca njengokupheka? Ewe, asinakuqinisekisa ukuba ukucoca kuya kuba ngowona msebenzi uchulumancisayo ukho, kodwa ubuncinci sinokubangela ukuba kube mnandi ngakumbi ngephekiji yasekhitshini lasentwasahlobo. Kwaye ngaphezulu kwako konke, singenza kube lula kakhulu ukucoca ngefenitshala ekhitshini lekhitshini.
Isitshixo sentsimbi ekhitshini le-Wowow entwasahlobo sigqibezele phantsi unesakhiwo sokusebenza. Intloko yesipreyi esinexinzelelo oluphezulu isusa ngokulula konke ukungcola kwiimbiza kunye neepani. Ngaphandle koko, le festile ekhitshini yasekhishini inikezela ngeendlela ezimbini zemijelo. Isiphuli sokudonsa phantsi sikunika isitshizi esikhulu soxinzelelo, kwaye itafile ekhitshini ephezulu ye-arc inomjelo oqhelekileyo. Ngombhobho wamanzi wokuphinda uguqulwe kwaye uguquguqukayo kunye nokutsala entloko kwentloko yokutshiza, isiciko se-hose singandiswa ukuze sandise ukufikelela kwakho kakhulu. Kwaye ingalo edibanisa amandla ombane ibamba ngokuqinileyo intloko yesitshizi, ukuze singadibani.
Ikhitshi lasekhitshini lasentwasahlobo lincothule isitshizi sokusebenzisa izixhobo
Ngaphandle kokusebenza, eli khitshi lasekhitshini entlahleni lokucoca isitshizi lenzelwe ukuqina. Okokuqala, zonke izinto azisebenzi-zikhokelayo kwaye azikwazi ukumelana ne-corrosion. Ngaphandle koko, i-valve yokulawula ubushushu bamanzi yenziwa ngentsimbi enkulu. Uziva umahluko ngoko nangoko xa uwuphatha. Kwakhona isiphatho sokutshiza senziwe ukusetyenziswa kwezorhwebo. Umahluko uya ochukumisayo xa uyithelekisa nepheki ekhitshini lasekhaya. Njengombane ekhitshini ekhitshini ongadingi imisebenzi eyilwe ngokudibeneyo ukuze 'ufihle' le misebenzi, kule festile yokuphuma kwetafile yasekhitshini inyusa isitshizi sesiphatho sibakho ngokuveleleyo. Ke ngoko akukho zinkathazo zenziweyo kum malunga nokusebenza kunye nokuqina kwesi siphatho sokupheka sekhitshi.
Isikhenkcisi esitshiweyo ekhitshini yasekhitshini sentwasahlobo susa isitshizi
Ngaphandle kokuqina kunye nokusebenza, isitayile sikwabaluleke kakhulu xa ukhetha isitofu sekhitshi lemizi-mveliso. Ufuna uyilo oluluhlaza, kwaye isitofu sokukhitshini kufuneka sibenesitayile ngaxeshanye. Le fektri yasekhitshini yasekhitshini intwasahlobo isitya isixhobo sokunyibilikisa ikunika indibaniselwano ephikisanayo yokuvelisa izinto ezingafunekiyo zemveliso kunye nenhle, yoyilo oluhonjisiweyo. Isithuba esikhulu esibonelela ngefenitshala yakho ekhitshini sinokubukeka okubonakalayo kumashishini, ukanti xa ujongisisa iinkcukacha kule fesiphu ekhitshini, uya kuqaphela uyilo oluphuculweyo lwesiseko sephedi ekhitshini. Oku kudityaniswa kwenza ukuba esi sitayile sahluke kwaye sahluke. Elula, lihle kwaye linomtsalane ngaxeshanye.
Ukudityaniswa kwe-nickel yomgangatho wephephethi lasekhitshini kwentwasahlobo kusihla isitya esinika oko ukugqiba okuhle okufuneka ekhitshini lakho. Oku kugqiba ngokukhawuleza kunika imbonakalo ekhange ngakumbi kuyo nayiphi na ikhitshi, nokuba loluphi uhlobo lwepheyile ekhitshini oyikhethileyo. Kwaye ngaphandle kwakho uya kuxhamla inzuzo ebonakalayo ukuba awuyi kubona nayiphi na iminwe emdaka yeminwe kule faucet ekhitshini. Kulula kakhulu ukuyicoca ukuze igcinwe ikwimo enesimo esitsha ngamaxesha onke.
Ukufakela ikhitshi lasekhitshini entwasahlobo yehlisa isitshizi
Isitshixo sentsimbi ekhitshini le-WOWOW entla kwentlahlela ukutshiza kulula kakhulu ukuyifaka. Sukubekwa kwingoma engalunganga ngenxa yobukhulu obunomtsalane bale fan yokukhanya ekhitshini. Unokufaka ngokulula le faucet ekhitshini lasekhitshini ngokwakho ngaphandle koncedo lwegcisa elibizayo. Isitshizi sesitshizi sentwasahlobo ekhitshini lesitshabalalisi siza phantsi nayo yonke into oyidingayo ukufaka lo mbhobho wasekhitshini, njengentaba yedesika, iihoses zamanzi zentsimbi, kunye nesikhokelo esicacileyo sofakelo. Nokuba iigloves ezisebenzayo zifakiwe ukukunika amava okufakelwa lula kunye nokukhululeka.
Ukushwankathela, eli khitshi lasekhitshini entwasahlobo lincothule isaphulelo sokunikezela ngexabiso elifanelekileyo lemali, ngenxa yomgangatho wayo wezoqoqosho kunye nexabiso elifanelekileyo. Kulula ukuyifaka, kwaye ngokuqinisekileyo iya kuba longezo oluxabisekileyo kuyilo lwakho lwekhitshi langoku. Le feksi yasekhitshini yasentwasahlobo idonsa isixhobo sokutshiza iza newaranti yeminyaka emi-5 kunye nokubuya kwemali kwiintsuku ezingama-90. Njengoko ubona, e-WOWOW sinentembelo kwikhitshi lethu lekhephu lasentwasahlobo isiwisa isitshizi kwaye siqinisekile ukuba uya kunconywa lixabiso lemali oza kuyifumana. Masikukhuthaze!
Izibonelelo zekhitshi lasekhitshini lasentwasahlobo lihlisa isitya ngesitshizi:
· Isikhitshisi esisebenza ekhompyutheni ephezulu
Ukufikelela ngokubanzi ngombhobho wamanzi anokuphindeka
Iinkcukacha ezibalaseleyo nezinesitayile
· Ingalo yokukhwela Magnetic
I-SKU: 2312000 iindidi: IFaucets yasekhitshini, Tsala iiFaucets tags: Uqhekeze uNickel, Ikhitshi lokuKhangela ekhitshini, Ukutsalwa kwesiphatho esinye
30.8 x 12.6 x 3 intshi